E-စီးကရက် ထည့်သွင်း ရန် ဆေးရွက်ကြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် ဥပဒေကို တရုတ်က ပြင်ဆင် - Pandaily
E-စီးကရက် ထည့်သွင်း ရန် ဆေးရွက်ကြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် ဥပဒေကို တရုတ်က ပြင်ဆင်
Nov 29, 2021, 12:54ညနေ 2021/11/30 12:35:27 Pandaily
ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းကE-စီးကရက် ထည့်သွင်း ရန် ဆေးရွက်ကြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် ဥပဒေကို တရုတ်က ပြင်ဆင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆေးရွက်ကြီး ဈေးကွက်တွင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား နေသော အငွေ့ ပျံ စေသော စက်မှု လုပ်ငန်းကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များချမှတ် ခြင်း။ အဆိုပါ အမိန့်ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ က်ဘ်ဆိုက် တွင် တင် ထားပြီး ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက် ခဲ့သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း ရှိ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် အမှတ်တံဆိပ် များသည် စျေးကွက် ဦး ဆောင် သူ RLX Technology Inc. အပါအ ၀ င် စည်းမျဉ်း များ ပြင်ဆင် ခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောက်ခံ ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခဲ့ကြသည်။
တရုတ် အီလက်ထရောနစ် ကုန်သည် ကြီးများ အသင်း၏ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် လုပ်ငန်း ကော်မတီက အီလက်ထရောနစ် စီးက ရက်ကို ကြီးကြပ် ခြင်းသည်အလွန် လိုအပ် ပြီး အချိန်မီ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု များကိုထိရောက်စွာ ထိန်းညှိ ရန်၊ ထုတ်ကုန် အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်း လုံခြုံရေး အန္တရာယ် များ ကိုဖြေရှင်း ရန်နှင့် စားသုံး သူများ ၏တရားဝင် အခွင့်အရေး များနှင့် အကျိုး စီး ပွားများ ကိုကာကွယ် ရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် အတွက် အမျိုးသားအဆင့် မဖြစ်မနေ စံချိန်စံညွှန်း သစ်ကို အမြန်ဆုံး စတင် နိုင်မည်ဟု ကော်မတီက မျှော်လင့်ပါသည်။
တကယ်တော့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာစက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန ၀ ဘ်ဆိုဒ်အီး စီးက ရက္ ကဲ့သို႔ ေဆး ရြက္ ႀကီး ထြက္ ပစၥည္း အသစ္ မ်ားကို ပိုမို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ ရန္ (စက္မႈ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ႀကီးဌာန) က မူၾကမ္း ထုတ္ျပန္ သည္။ ယနေ့ တွင်ဤ စည်းမျဉ်း ကို တရားဝင် အကောင်အထည်ဖော် ခြင်းသည် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် သည် စည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ထားသော မီးခိုးရောင် from ရိယာ မှထွက်ခွာ သွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များတွင်ပါ ၀ င်မှုသည် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် လုပ်ငန်း၏ လျင်မြန်စွာ တိုးချဲ့ မှု နှင့်နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အီလက်ထရောနစ် စီးက ရက်ကို ဆေးလိပ်သောက် သူများ စွ ာက အဆင်ပြေ စွာ အသုံးပြု ခြင်းနှင့် စီးကရက် နှင့်ဆင်တူ သော အရသာ နှင့် အရသာ တို့ကြောင့် ရှာဖွေ ခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၀ င်ရောက် ရန် အတားအဆီး နိမ့်ကျ ခြင်းနှင့် အမြတ်အစွန်း ကြီးမား ခြင်းတို့ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်း သည် မြန်ဆန်သော လမ်းကြောင်း သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
မွIiMedia သုတေသနတရုတ်နိုင်ငံတွင် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၄၅, ၄၀၀ မှ ၂၀၂၀ တွင် ၁၆၈, ၄၀၀ အထိ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ အီး စီးက ရက္ လုပ္ငန္း ေပါင္း ၁၇၀, ၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေဆးလိပ္ ျဖတ္ ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ ေစႏိုင္ သည္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အီး စီးက ရက္ကို “ဖက်ရှင် ကျ ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ကင်း ခြင်း” ဟူသော ဆောင်ပုဒ် ကြောင့် ဆေးလိပ် မသောက် သော လူငယ် အချို့သည် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် ကိုစတင် ဝယ်ယူ ခဲ့ကြသည်။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေတြအတြင္း အရြယ္ မေရာက္ ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ ေတြရဲ႕ အီး စီးက ရက္ သံုးစြဲ မႈ အရနို ၀ င်ဘာလတွင် Fudan Development Institute မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာရှန်ဟိုင်း၊ ကွမ်ကျိုး နှင့် ချန် ဒူး ရှိ ဆယ်ကျော်သက် ၂, ၄ ၀၅ ယောက်တွင် ၉၄. ၃% သည် e-စီးကရက် အကြောင်းကြား ပြီး ၄. ၅% သည် e-စီးကရက် သောက် ကြသည်။ ၎င်းတို့အနက် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် ကိုအသုံးပြု သောလူ အများစု သည်အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြား ဖြစ်သည်။
အရွယ် မရောက်သေး သူများကို အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် မှ ကာကွယ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာန များ၏ မူဝါဒ များ သည်တဖြည်းဖြည်း စတင် ပေါ်ပေါက် လာသည်။ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် အရွယ် မရောက်သေး သူများအား အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် များ ရောင်းချ ခြင်းကို တားမြစ် ထားသည့် အရွယ် မရောက်သေး သူများအား အကာအကွယ် ပေးရေး ဥပဒေ အသစ် တွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:အရွယ် မရောက်သေး သူများ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် သုံးစွဲ ခြင်းကို တားမြစ် လိမ့်မည် Xinhua
Tags ∗Bytedance | ∗Didi Chuxing | ∗Luckin Coffee | ∗Tencent | ∗xiaohongshu | 996.ICU | aerospace | Alibaba | automotive industry | Autonomous Driving | Beijing Winter Olympics | Blockchain | bribery | Bytedance | CES | China | China VC Weekly | Coffee Chain | commercial rocket | delivery service | Digital Currency | Douyin | E-cigarettes | E-Commerce | e-yuan | electric vehicle | Featured | Featured | financing | fintech | Food | freshippo | Haidilao | Hot Pot | internet community | Internet company | Investment | LIDAR | market regulation | market regulation | massive layoff | minor protection | mobile internet | Music | Online Education | overseas markets | regulation | retail coffee chain | ride-hailing platform | Robot | social media | Social network | technology | Tobacco | Tobacco | Winter sports | Xiaomi∗ | XPeng Motors
တရုတ်ကျူရှင်လုပ်ငန်းများ ပြိုကျပျက်စီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှုံးပေါ်နေ
တရုတ်ပညာရေးနဲ့ နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အနေအထားပါ။ “Double Double Down” မူဝါဒဟာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ကဏ္ဍတခုလုံးကို အကျပ်အတည်း ဖြစ်စေပြီး ကဏ္ဍတခုလုံး ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် အကျပ်အတည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Industry Aug 24 ဩဂုတ် 24, 2021
ေဆြရွိန္းေကာ္ဖီ အဆင့္ျမင့္တင္ေရး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရး အစီအစဥ္ လ်ာထားခ်က္ ၿပီးစီးသြားၿပီ
အင်္ဂါနေ့ညက ရိုင်ရှိန်းကော်ဖီကုမ္ပဏီဟာ Kamman Islands Grand Court ကို ပူးတွဲထုတ်ဝေတဲ့ ယာယီရှင်းလင်းရေးရဲ့ တတိယမြောက်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Industry Sep 08 စက်တင်ဘာ 8, 2021
Industry Sep 17 စက်တင်ဘာ 17, 2021
Shein ၏ Independent Designer Program သည် အတုယူ ရန် ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှု လား။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ခရစ် သည် အမြတ်အစွန်း များသော အမြန် ဖက်ရှင် ကုမ္ပဏီ SHEIN တွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကျွမ်းကျင် သူဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် သောင်း နှင့်ချီ သော စျေး ပေါသော ထုတ်ကုန် အသစ်များ ကိုထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်း ရှိသောကြောင့် မကြာသေးမီက ပေါက်ကွဲ ခဲ့သည်။
Industry Dec 04 ဒီဇင်ဘာ 7, 2021